Saddexdan Noole ba Foosha Dhib bay ku Maraan. Qalinkii: Samatar Xaaji. | Hargeysa World~Herald
Saddexdan Noole ba Foosha Dhib bay ku Maraan. Qalinkii: Samatar Xaaji.
UncategorizedSaddexdan Noole ba Foosha Dhib bay ku Maraan. Qalinkii: Samatar Xaaji.
1. Aynu ku bilowno waraabaha dhedig aynu maalin dhawayd isla soo hadal qaadnaye, marinka uu ilmuhu soo maro waa kaas sawirka ka muuqda.
2. Shimbirkani ma duulo, Asal ahaan deegaankiisu waa New Zealand. Waxa sidaa u goday waa ukunta qarada weyn ay ee uu siddo. [Fiiri sawirka 3aad]
3. Noolahan oo loo yaqaan Tasmanian Devils, dhibka iyo isagu way wada dhashaan. Si kastooy hooyadood caano badan ugu deeqdo ubadku markay dhashaan waxay tartan u galaan ugaarsiga waxay cuni lahaayeen. Intii hesha way badbaadaan, intii kalena waa le’daan ama bakhtiyaan.
FG; Dumarka iyagana fooshoodu ma howl yara balse saddexdan noole ta ay maraan Hooyooyinka ayaa ka sii dhib badan. Sidaas oo ay tahay baannu dheer nahay wax soo saar hormari ku socdo iyo xarumo caafimaad innagu ka aadane ahaan.